हाम्रो ईतिहासको अग्रणी क्याप्स पत्ता लगाउनुहोस्! - THE INDIAN FACE
क्याप्सहरू हाम्रो ईतिहासको नायक हुन्!
क्याप्सहरू संसारभरका लाखौं व्यक्तिहरू द्वारा दैनिक प्रयोगका लागि प्रयोगका लागि वस्त्र र सहायक बनिसकेका छन्: संगीतकारहरू, स्केटबोर्डरहरू, एथलीटहरू ... यी सबै व्यक्तिहरूले क्यापलाई निश्चित संस्कृतिहरू, खेलकुद वा आन्दोलनहरूको लागि आइकनिक कपडा बनाएका छन्। मा The Indian Face हामी सुरुदेखि नै फेसनमा क्याप्सको महत्त्वको बारेमा स्पष्ट थियौं। यस कारणका लागि, हाम्रो संग्रह ट्रक क्याप्स र खेलकुद शुरू देखि नै एक सफलता भएको छ: यो हाम्रो भारतीय आत्मा को एक प्राथमिक पूरक हो। क्याप पूरक हो जुन हाम्रो दिनदिन सेवा गर्दछ चाहे यो नदी होस् वा रंग, यो हाम्रो व्यक्तित्वको अर्को स sign्केत बन्छ र यसले हामीलाई दिने शैली हाम्रो वार्डरोबमा आवश्यक छ। हामी कसरी थाहा पाउँछौं कि हाम्रो सर्फ क्याप्स, स्केट क्याप्स र अन्य फ्री स्टाइल-प्रेरित डिजाइनहरू तपाईंलाई मनपराउँदछन्, आज हामी क्यापको इतिहास र टिप्सको ईतिहासमा पहिले र पछाडि चिन्ह लगाईएको इतिहासको बारेमा केही कुरा गर्न चाहन्छौं!
के तपाईंलाई थाहा छ जहाँ हाम्रो जस्तो क्याप्सको ईतिहासको उत्पत्ति छ ट्रक क्याप्सThe Indian Face? हामी धेरै वर्ष पछि फिर्ता जानु पर्छ! यो पुरानो फारसको बारेमा हो, जहाँ टोपी जहिले पनि टोपीको छायाँमा प्रयोग गरिन्थ्यो, किनकि माथिल्लो वर्गले तिनीहरूलाई बढी लगाउँथ्यो। यो नाविकहरू, ट्रान्सपोर्टरहरू र खेल्नेहरू थिए जसले यी क्यापहरू अत्यधिक मौसमबाट आफूलाई जोगाउन सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्थे, त्यसैले आज हामी उनीहरूको भूमिगत शैली कल्पना गर्न सक्छौं! निस्सन्देह, फोटोग्राफीको इतिहासमा सब भन्दा विशिष्ट छविहरू तपाईंलाई लाग्दछन्: यो २० औं शताब्दीको सुरूमा यी कामदारहरू र कामदारहरूको बारेमा हो, तिनीहरू सबैले पहिले नै टोपी लगाएका थिए!
बिस्तारै, क्याप्सले फेसनको संसारमा उनीहरूको ओहदा पाइरहेका थिए। धेरै चाँडै क्याप, र यस प्रकारको ट्रक क्याप्सउनले खेल संग सम्बन्धित गर्न थाले र बेसबल संग त्यसो गरे। यो खेलमा ब्याट्सम्यानले जहिले पनि सूर्यबाट आफूलाई जोगाउन टोपी प्रयोग गर्थे, किनकि सुरुमा परालले बनेको केही प्रयोग गरिन्थ्यो। यो १ 1860० मा थियो जुन एक अमेरिकी टोली एक गोल क्याप रहेकोमा चिनिन्थ्यो जुन सजिलै टाउकोमा फिट हुन सक्थ्यो र सूर्यबाट आँखा सुरक्षित गर्‍यो, त्यसबेला केही नयाँ कुरा थियो! यस खेल भित्र, हालको बेसबल टोपी निकै विकसित भएको छ, डिजाइन र गुण दुवै दुबै: हाल, यसमा छवटा प्यानल र एक गोल भिसा छन्। धेरै समान ट्रक क्याप्सजुन हामीसँग हाम्रो क्याप्सको संग्रहमा छ The Indian Face!
यस कारणका लागि यस प्रकारको टोपी सँगसँगै ट्रक क्याप्सतिनीहरू लगभग एकै रातमा एक प्रतिमा बने। तर यो केवल बेसबलमा थिएन कि क्यापको ठूलो भूमिका हुन थाल्यो, तर अन्य धेरै खेलहरूमा! खेल क्यापहरू ती आधारभूत सामानहरू मध्ये एक हुन् जुन व्यावहारिक रूपमा सबैलाई थाहा हुन्छ, र किनभने यो आधारभूत हो यो कम महत्त्वपूर्ण हुँदैन जब यसलाई प्रयोग गर्ने आउँछ। जब हामी घाममा धेरै घण्टा खर्च गर्न जाँदैछौं, हाम्रो टाउकोको रक्षा गर्नु भनेको त्यस्तो चीज हो जुन लामो समयसम्म प्रशंसा गरिन्छ। यो एक बहुमुखी गौण हो, किनकि यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने हिंड्न वा कसरतको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तिनीहरूमा हावा आवतजावत केहि मौलिक छ, प्रकाश सामग्री र पसीनाको साथ यस प्रकारको भित्र सँधै हावाको बहावलाई अनुमति दिन्छ। खेल ट्रक क्याप्स। साथै, हामी राम्रो फिट बिर्सनु हुँदैन, ताकि टोपी सहज छ र हामी यसको साथ कुनै पनि प्रकारको खेल खेल्न सक्छौं, यो बिर्सदै कि यो अवस्थित छ तर हाम्रो हेडलाई जहिले पनि जोगाउँदै। यदि होईन भने, उनीहरू पेशेवर साइकल चालक मिगुएल इन्दुरेनलाई सोध्छन्, जो सधैं आफ्नो प्रतिस्पर्धाहरू सञ्चालन गर्दा क्याप्सको लागि स्वभावका लागि परिचित छ। उनीहरूको खेल भित्र, साइकलको, जहाँ तिनीहरूले त्यस घण्टामा धेरै घण्टा बिताउँछन् र जहाँ मौसम अवस्था धेरै सूर्य वा वायु र वर्षा हुन सक्छ, टोपी पूर्ण रूपले फेशनसँग सम्बन्धित हुनु बाहेक यो सधैं "साँचो" हुनुपर्दछ। र यो सधैं प्रवृत्तिमा हुन्छ! के तपाईलाई हाम्रो मनपर्ने साइकल चालक उसको पौराणिक "बानेस्टो" क्यापको याद छ?
यद्यपि यस प्रकारको ट्रक क्याप्स उनीहरू केवल खेलको दुनिया मा प्रवेश गरेका छैनन्। हामी स्पष्ट छौं कि ती प्रत्येक साहसीको जीवनमा आवश्यक हिस्सा हुन्। जो व्यक्ति जोखिम लिन्छन् उनीहरूको टोपी बिना कार्यमा चल्दैनन्, जसले व्यक्तित्व दिन्छ र दिनको कुनै पनि भागका लागि उत्तम पूरक हो। हामीले अगाडि नै भनेजस्तै यो सिनेमाको आइकन मध्ये एक हो, जबसम्म यो सिनेमा र टेलिभिजनको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्महरूका लागि उत्तम कुरा हुँदैन। निस्सन्देह तपाईले धेरै क्यापहरुसंग परिचित हुनुहुनेछ जुन हामी अर्को बारे कुरा गर्नेछौं। हामीले तिनीहरूलाई हाम्रा धेरै मनपर्ने चलचित्रहरू र श्रृंखलाहरूमा देख्यौं! के तपाई तिनीहरूलाई पहिचान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ?
हामी "मार्क टू द फ्यूचर" (१ 1985 XNUMX) मा विशिष्ट मार्टी म्याक्फ्लाई टोपीको साथ शुरू गर्नेछौं, हामी कसरी उनी र वैज्ञानिक एम्मेन्ट ब्राउनको अघि-अघि र पछाडि "भविष्यमा भविष्य" त्रिकोणमा यात्रा गर्दै आएका घटनाहरूलाई बिर्सन सक्छौं। माइकल जे फॉक्स र क्रिस्टोफर लोयड द्वारा! तर हामीसँग के रह्यो त्यो त्यो गुलाबी टोपी हो जुन नायकले आफ्नो सबै समयमा यात्राबाट आफूलाई लुकाउन प्रयोग गर्दछ।
उहाँ धेरै प्रशंसकहरूको लागि सँधै एक उत्तम फेसन आईकन हुनुहुन्छ, जसले पछि यसका अतिरिक्त मूल र आजको प्रतिकृति टोपी किन्नुभयो, यो चरित्र अझै पनि फेसनमा एक प्रवृत्ति हो, र सँधै उसको टोपीको साथ हुन्छ! यद्यपि यदि हामीले पौराणिक फिल्महरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दछ जहाँ एक टोपी पनि एक मुख्य पात्रको अपरिहार्य पूरक हो, हामीले १ 1994 XNUMX in मा "वन गम्प" मा बुब्बा गम्प शिप को बारेमा कुरा गर्नु पर्छ।
उसको करिश्माले धेरै धेरै प्रेमीहरूको मन जित्यो! उनको व्याख्याबाट सबै इतिहासमा सब भन्दा प्रतिनिधि टोपी देखा पर्दछ: यो "बुब्बा गम्प झींगा को" को टोपी हो, रेस्टुरेन्ट जुन इतिहासमा बुब्बा र फोरेस्ट एकसाथ खुल्छन्। यो सम्पूर्ण चलचित्र ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा विशिष्ट क्याप्सहरू मध्ये एक हो! के तपाईं यी कुनै पनि पौराणिक चरित्रको कुनै पनि हाम्रो लगाएको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ट्रक क्याप्सThe Indian Face? मार्टी म्याक्फ्लाइले निश्चित रूपमा # बोर्नटोस्केट क्याप पाउनेछ, किनकि जुन उनी सधैं रोलमा हुन्थे! र हाम्रो प्रसिद्ध र प्यारो वन गम्प ... जो कोही! उहाँ वास्तवमै स्वतन्त्र हुनको लागि जन्म भएको पूर्ण स्वतन्त्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो।
तपाईं कसरी देख्न सक्नुहुन्छ: ट्रक क्याप्स तिनीहरू कहिल्यै ध्यान दिएनन्। तिनीहरू हाम्रो इतिहासमा लामो समयको लागि देखा पर्‍यो, र त्यो क्षणदेखि तिनीहरू विकसित हुँदैछन् र खेलकुदको भित्र र बाहिरका क्षेत्रमा अधिकाधिक क्षेत्रहरूमा पुगेका छन्।
बाट The Indian Face हामी दिन प्रति दिन हाम्रो संगठनहरूलाई व्यक्तित्व र शैली दिंदा क्यापको महत्त्वको बारेमा हामी सँधै सचेत छौं। यस कारणका लागि, हामीले हाम्रो वेबसाइटमा रहेका सबै मोडेलहरू हेर्ने मौका गुमाउनु हुँदैन र यसैले त्यो छनौट गर्न सक्षम हुनुहोस्। Gorra Trucker त्यो उत्तम तपाईंको शैली र व्यक्तित्व सूट गर्दछ।
के हाम्रो क्याप्सहरू पनि इतिहासमा तल झर्नेछ? यदि तपाईं ती भारतीय अ Spirit्गमा राख्नुहुन्छ भने, निश्चित हुनुहुन्छ!
महान ब्यारियर रीफको पछि रहस्यहरू पत्ता लगाउनुहोस्!
ग्रेट ब्यारियर रीफ क्वीन्सल्याण्डको इलाकामा अस्ट्रेलियाको उत्तरपूर्वी भागमा संसारमा कोरल चट्टानहरूको सबैभन्दा ठूलो सेट हो। 340.000०,००० किलोमिटर भन्दा बढी कभर गर्दै, ग्रेट ब्यारियर रीफ र
कोविडको समयमा पहाडका खेलहरू अभ्यास गर्नका लागि १० चीजहरू
तपाईंको ब्याकप्याक सुसज्जित गर्नुहोस् र तपाईंको अर्को साहसिक कार्य योजना गर्नुहोस्! यद्यपि महामारीले हाम्रो जीवन प्राय: सबै पक्षमा परिवर्तन गरेको छ, तर #IndianSpirits हार मान्दैन र चरमको लागि बाँच्न जारी गर्दछ, हो, सी
१० अचम्मका चीजहरू जुन तपाईलाई सर्फिंगको बारेमा थाँहा थिएन
हामीले सर्फिंगको बारेमा सबै भन्दा राम्रो जिज्ञासु तथ्य संकलित गरेका छौं, त्यसैले तपाईं यो अविश्वसनीय चरम खेलको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुनेछ। तपाईं तिनीहरूलाई याद गर्न सक्नुहुन्न!
सर्फ प्रेमीहरूका लागि: खेलको रूपमा यसको वास्तविक उत्पत्ति जान्नुहोस्!
सर्फिंगको बारेमा ईतिहास र रोचक तथ्यहरू पत्ता लगाउनुहोस्! यो पहिलो साहसीले सोचेको since०० बर्ष भन्दा बढी इतिहास हो: पोलिनेशियन टापुहरूमा "त्यस छालमा सवार हुन म शान्त हुन्थें", जब उनी
तपाईको ट्र्याकर क्याप्स धुने मार्गनिर्देशन
तपाईंको मनपर्ने टोपी खराब हुन नदेऊ! तपाईंको ट्रयाकर टोपीलाई कसरी सफा गर्ने भन्ने बारे द्रुत र सजिलो गाइड यसलाई राम्रो अवस्थामा राख्नुहोस् र लामो समय सम्म रहनुहोस्।
स्की चश्माहरू कहिले र किन तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने?
स्की गग्गल लगाउनु आवश्यक छ जब हामी यस खेललाई यसको कुनै पनि ढाँचामा अभ्यास गर्छौं। तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि अवस्थित स्की मोडलिटीहरू के हुन्? हामीसँग केहि पत्ता लगाउनुहोस्
एभिएटर चश्माको इतिहास संसारमा सब भन्दा प्रतिष्ठित!
के तपाईलाई एभिएटर चश्माको इतिहास थाहा छ? राम्रोसँग "एभिएटरहरू" भनेर चिनिन्छ यो सब भन्दा राम्रो र सबै भन्दा राम्रो आइकनको चश्मा मोडेलहरू मध्ये एक हो। पत्ता लगाउनुहोस् कि यो प्रतीकात्मक कसको जन्म भयो
Most सबैभन्दा आदर्श क्षणहरू तपाईंको स्की गगल्स लगाउन
के तपाईं प्रकृतिको जोखिमहरू पार गर्न वास्तवमै तयार हुनुहुन्छ जब तपाईं स्की गर्नुहुन्छ? Most सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पलहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसमा तपाईं उत्कृष्ट स्की गगल्स लगाएकोमा प्रशंसा गर्नुहुनेछ!